अब अनलाइनबाटै जुनसुकै विषयगत प्रश्नको उत्तर पाइने, कसरी खोज्ने ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अब अनलाइनबाटै जुनसुकै विषयगत प्रश्नको उत्तर पाइने, कसरी खोज्ने ?
साउन १५ गते, २०७७ - १९:४५
काठमाडौं । विद्यार्थीले सोधेको विषयगत प्रश्नको उत्तर अब अनलाइनमा नै प्राप्त हुने भएको छ । पाठशाला नेपालले उबतजकजबबिलभउब।िअयm मा विद्यार्थीले सोधेको जुनसुकै प्रश्नको उत्तर सजिलै एकदेखि दुई घण्टामा उपलब्ध गराउने नेपालका सञ्चालक गोविन्द सापकोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उक्त अनलाइनमा विद्यार्थीले कक्षा ८ देखि स्नातकोत्तर तहसम्म र लोकसेवा आयोगसम्बन्धी प्रश्नको उत्तर दिइनेछ । “विद्यार्थीले आफू नजानेको प्रश्न अनलाइनमा अपलोड गर्ने छन्”, उनले भने, “अनि हामीले ती विषयसँगसम्बन्धी शिक्षकबाट प्रश्नको उत्तर सोही अनलाइनमा राख्नेछौँ ।” अहिले दैनिक ५० वटा प्रश्न सोधिने गरेका छन् । विशेषगरी गणित, विज्ञान विषयमा विद्यार्थीले बढी प्रश्न सोध्ने गरेका छन् ।
साउन १५ गते, २०७७ - १९:४५ मा प्रकाशित